Iva Mutengo weSarudzo | Martech Zone
Iva Mutengo weSarudzo
Mugovera, Kukadzi 13, 2010 Mugovera, Mbudzi 28, 2015 Lorraine Bhora
Mune yapfuura posvo, Seth Godin akabvunza mubvunzo wakakosha ini ndinofunga wega muridzi webhizinesi anoda kupindura: Sei Iwe? Nei Zvino?
Ngatitarisei mumazhinji zvigadzirwa, asi zvirokwazvo mumasevhisi einternet isu tine sarudzo. Kana zvasvika kune vanopa Email, webhu inomiririra, uye software yehukama manejimendi manejimendi, muridzi webhizimusi akangwara anofanira kubvunza chingawanikwa: Nesarudzo dzakawanda kudaro, nei ndichifanira kukusarudza?
Pandakatanga bhizinesi rangu ndakanyura kumutengo wakaderera, vazhinji varidzi vemabhizinesi vanoita. Asi mushure mekudyidzana kushoma nevatapi vemutengo wakaderera, kazhinji kana chimwe chinhu chikatadza kuenda, ndakadzidza kuti nguva yangu yaive ine kukosha. Saka ikozvino, pandinoongorora zvishandiso zvepamhepo uye zviwanikwa, ndine akati wandei maitiro akakosha kupfuura mutengo.
Chigadzirwa chinozadza here my zvinodiwa. Kunyange paine akati wandei eCRM maturusi aripo nhasi, ini ndinoshandisa KeroTwo, nekuti yakagadzirirwa nemunhu akamhanyisa bhizinesi senge rangu. Misoro, minda, dashibhodhi kurongeka uye zvine musoro kwandiri.
Ndingaziva here kuti zvinoshanda sei ndisina kuverenga chidimbu cheraira refu, kana kuita kuti mumwe munhu andifambe nayo. Handina nguva yemademo marefu mukati mezuva. Uye kunyangwe ndichigona kuverenga (chaizvo chaizvo chaizvo) ini handidi kutora nguva yekufamba nemirairo. Software sevhisi, inofanirwa kuve yekuzvishandira. Iyo yekushandisa interface inofanirwa kuve intuitive. Ini ndichave ndichigadzirira kuisa nguva yezvinhu zvemberi, asi ndipe izvo zvekutanga. Wangu wandinofarira muenzaniso weiri nyore mushandisi interface: Nguva Dzose Kubata. (Ini ndiri zvese nezve zvemuno, uye ndinovenga chokwadi chekuti handikwanise kutsigira chero edu eIndipolis based based eMail makambani, asi ini handina chandakawana chiri nyore kushandisa)
Vanhu Powered technical Rutsigiro. Pandinenge ndichifunga kusaina chishandiso chepamhepo, chimwe chezvinhu zvekutanga zvandinoita, ndisati ndavapa kiredhiti kadhi rangu, kudaidza yavo yekutsigira mutsara. Ini ndoda kuziva kuti mangani akateedzana e2,3,2,1,1,1,1,1 # Ini ndinofanira kurova kumhanya ndisati ndawana munhu mupenyu. Uye kana ndichidaro, vari kushanda here kubvisa chinyorwa, ine chaiyo seti yemibvunzo, kana ivo vari kugona kuteerera yangu? Fona online fomu anovaka'sFormstack technical technical kana Provim uye iwe uchaona zvandiri kureva. Vanhu chaivo, nekwaniso yekunzwisisa mibvunzo yako. Ipo GoDaddy yawana zvirinani, iyo yekumirira ichiri yakanyanyisa kureba, uye huwandu hweruzivo iwe hwaunofanirwa kungoita kuti uwane mhinduro inopindurwa kazhinji haina musoro.
Izvi zvangu “Sei iwe, sei ikozvino”Maitiro. Pamwe ini handisi wako wekuvavarira mutengi. Kana ndisiri, inzwa wakasununguka kufuratira maonero angu. Asi usafunge kuti unoziva nzira yesarudzo yevatengi vako. Tora nguva yekubvunza vatengi vako kuti sei vakasarudza iwe, uye nekuvandudza kutumira kwako pane izvo zvinhu uye mutengo unozoita kunge usina basa.
Tags: muchiso utaririkushambadziraConstant Contactformstackchigadzirwa manejimendikushambadzira kwechigadzirwaprovimdenderedzwa
Kusunga Simba reSocial Media - Kurume 16, Tampa
B2B Kubhuroka - Webtrends Engage 2010